Otu esi eme nkwalite na Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) - LinuxCapable
Otu esi eme nkwalite na Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
November 11, 2021 November 8, 2021 by Jọshụa James
Ubuntu 22.04 usoro iheomume
Ọkwa dị mkpa nke nkwalite beta
Kwalite na Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish
Ubuntu 22.04 LTS ọhụrụ na-abịa ngwa ngwa, ebe ọ na-enweta aha njirimara aha ya Jammy Jellyfish n'oge na-adịbeghị anya. Maka ugbu a, edobere nhazi oge maka mwepụta na Eprel 21, 2022, mana nke a nwere ike ịgbanwe n'ọdịniihu n'otu oge.
Offọdụ n'ime atụmatụ ọhụrụ gụnyere:
GNOME 42 Desktọpụ
Linux Kernel 5.16 ma ọ bụ 5.17
Mepee OpenSSL 3.0
Nke a bụ obere ndepụta nke ihe ga-abịa, yana ihe ndị ọzọ a ga-ekpughe na obi abụọ adịghị ya na agbakwunyere na ntọhapụ zuru oke.
Maka ndị na-achọ ị nweta sneak pek, ị nwere ike download kwa ụbọchị na-ewu ebe a, ma ọ bụ maka nrụnye dị ugbu a, ị ga-amụta ka esi kwalite site na Ubuntu 21.10 Imish Indri zuru oke na ngalaba beta (mpụtapụta) nke koodu Ubuntu 22.04 LTS aha ya bụ Jammy Jellyfish.
Ihe na-esonụ bụ usoro iheomume maka mmepe, ifriizi, beta, na ntọhapụ nke Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish, gụnyere ụbọchị njedebe nke ndụ.
October 2021 - Mbido mmalite amalitela.
Febụwarị 24, 2022 - Njirimara mbụ kwụsịrị.
Machị 31, 2022 - Ntọhapụ beta.
Eprel 14, 2022 - Nkwụsị ikpeazụ, Onye Ntọhapụ Mwepụta Mbụ.
Eprel 21, 2022 - Haziri ntọhapụ zuru oke nke Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish.
April 2027: Ọgwụgwụ nke Ndụ.
Enwere ike ịgbanwe ụbọchị n'otu oge, mana ekwesịrị imechi ụbọchị ma ọ bụrụ na agbanwere ya.
OS akwadoro: Ubuntu 21.10, sistemu Ubuntu ndị ọzọ ga-ebuli elu.
Ugbu a, na nkuzi a, ngalaba beta ma ọ bụ mmepe nke Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish enweghị ntụkwasị obi. Ewelitela PC bụ isi gị na ụdị a. Kama, jiri ma igwe mebere ma ọ bụ laptọọpụ mapụtara ma ọ bụ PC.
A ka na-ahazi ntọhapụ a maka Eprel 2022. Naanị mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị bụ egwuregwu zuru oke, ị kwesịrị ịkwalite isi desktọpụ gị na beta. Ọbụna mgbe ahụ, jide n'aka na ị ga-eme nkwado ndabere nke data ọ bụla dị egwu! Adọla gị aka na ntị.
Ọ bụrụ na njikwa mmelite emepeghị, lelee ka etinyere mmelite-manager-core. Site na ndabara, nke a kwesịrị ịdị.
Ọ bụrụ na mpio mmapụta ahụ apụtaghị na ọ kwalite site na 21.10 ruo 22.04, nke a na-emekarị site na ịkwaliteghị ngwugwu gị. Dị ka mmalite nke nkuzi, jide n'aka na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.10 gị dị adị adịla ọhụrụ.
Kwụpụ 4. Mgbe ịhọrọ iwepụ ma ọ bụ dobe ngwugwu ndị na-abaghị uru, usoro ndabara ga-abụ idobe ngwugwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi azụ, ma n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ewepụ ha na akụkụ a, mana nke a bụ mkpebi maka ịhọrọ.
Ozugbo echichi mechara, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ Ubuntu gị iji mechaa nkwalite ahụ.
Kwụpụ 5. Ozugbo ị malitegharịrị sistemụ arụmọrụ gị, a ga-etinyerịrị 22.04 Jammy Jellyfish mmepe nke ọma. Iji gosi nke a, meghee ọdụ Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T) ma jiri iwu na-esonụ:
Ekele, ị rụnyela ma kwalite na Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish.
Mgbe nkwalite ahụ gasịrị, ọ bụrụ na ihe niile arụ ọrụ nke ọma na ọ dịghị njehie ọ bụla mere, ma ị wepụghị ngwugwu ochie ochie mgbe a kpaliri n'oge nkwalite mbụ, ị nwere ike ihicha usoro gị site na iji iwu na-esonụ iji wepụ ma hichaa sistemụ arụmọrụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka ị ga-esi kwalite ntọhapụ obere oge Ubuntu 21.10 dị ugbu a na beta / mwepụta nke Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. Ihe ndị a na-ewu abụghị maka nkezi onye ọrụ ruo mgbe onye nyocha RC ikpeazụ dị. N'ozuzu, a ga-eji alaka mmepe ahụ naanị maka ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị mmepe, ma ọ bụ ndị ọrụ ike nwere ike ịnagide ngwugwu agbajiri na mperi sistemu.
Categories Ubuntu Tags Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Mail igodo
Otu esi etinye Firefox na-esote (Beta) ma ọ bụ Firefox Quantum (abalị) na Desktọpụ Ubuntu